Izicwangciso zokutya ezintlanu zabantu abanesifo seswekile -
Sifumana umbuzo omnye kubantu baseMzantsi Afrika abaneswekile ngokuphindaphindiweyo: unayo isicwangciso sokutya? Ewe siyakwenza – nantsi ke. Kodwa isicwangciso esinye sokutya asithethi ukuba senza ingqiqo kuba sonke sineendlela ezahlukeneyo zokutya. Abanye bethu batya imifuno kuphela, batya imenyu yesintu, batya ikakhulu ukutya kwaseIndiya okanye kufuneka batye ukutya okufikelelekayo.
Yiyo loo nto besonwabile ukufumana ezi zicwangciso zokutya zintlanu zivela eSanofi, sinemibono ngayo yonke into ukusuka kwindlela yokutya yaseNtshona ukuya ekutyeni kohlahlo-lwabiwo mali, ukutya kwaseIndiya, ukutya kwemifuno kunye nokutya kwesintu. Jonga izicwangciso zokutya ezingezantsi, kwaye uzidawunilode ukuze ubone ulwazi ngokupheleleyo.
Umzekelo wendlela yokuphaka
Ezi zicwangciso zokutya zonke zisebenzisa imodeli yeplate ukunceda ngenxalenye. Umbono kukuba wahlule ipleyiti kubekane.
Gcwalisa isiqingatha sepleyiti ngeendlela ezahlukeneyo zemifuno.Isipinatshi, iminqathe, iletisi, igem squash, iminqathe, ii-ertyisi, ibutternut, i-beetroot, ikhaphetshu, iimbotyi eziluhlaza, i-broccoli, icauliflower, iitumato, ityhukhamba, amakhowa, iipepile, i-asparagus, amabolose zizinto zonke ezilungileyo.
Gcwalisa elinye lamacandelo ekota ngengqolowa epheleleyo, ifayibha ephezulu, istatshi esisezantsi nge-GI.Umbona, i-oats eqengqelweyo, ukutya okune-fayibha, ingqolowa, “iStampkoring”, irayisi yasendle emdaka, ibhatata, isonka esinzima / isonka se-rye kunye zizinto zonke ezikhethwayo.
Gcwalisa ikota yokugqibela yepleyiti ngokutya okuneproteni. Inkuku engenakusu kunye neturkey, intlanzi kunye nokunye ukutya kwaselwandle, inyama yenkomo kunye nehagu (inyama yesirloin, ifillet okanye inyama yehagu), itofu, isoya, amaqanda kunye nemidumba (iilentile, iimbotyi ezomileyo kunye neenkukhu). Kulumkele ukutya okusiliweyo.
Iziqhamo kunye neemveliso zobisi
Ezizidlo sicebisa malunga neendlela ezahlukeneyo zeziqhamo nendlela zokugada isixa sokutya okutyayo
Isixa sokutya esiphakathi kwamaxesha okutya (iiorenji, iiapile, amapere okanye iibhanana ezincinci), okanye iziqhamo ezibini ezincinci (iiplums), okanye ikomityi enye yesaladi yeziqhamo. Ngalo lonke ixesha yitya iprotheni (amandongomane, itshizi, ibhotolo yamandongomane) neziqhamo ukuthintela iswekile egazini.
Unokongeza ii-servings ezi-2 zobisi ngemini: iglasi (i-240 ml) yobisi olunamafutha asezantsi, iyogathi engenaswekile.
Isicwangciso sokutya sasNtshona
Dawunilada isigcwangiso sokutya kwaseNtshonaDownload
Isicwangciso sokutya semali efikelelekayo
Dawuniloda Isicwangciso sokutya semali efikelelekayoDownload
Isicwangciso sokutya sabantu abatya imifuno kuphela
Dawuniloda Isicwangciso sokutya sabantu abatya imifuno kuphelaDownload
Isicwangciso sokutya kwesiNtu
Dawuniloda Isicwangciso sokutya kwesiNtuDownload
Isicwangciso sokutya saseNdiya
Dawuniloda Isicwangciso sokutya saseNdiyaDownload
Sazise ukuba zeziphi kwezi zicwangciso zokutya onomdla kuzo, okanye zeziphi iingcebiso eziluncedo onokuthi wabelane ngazo malunga nezicwangciso zokutya kunye neswekile.